အလကားရတဲ့ softwarez တွေ | You will need Zawgyi font to view this site
Filed under: Multimedia — gurugyi @ 5:34 am
အလကားရမယ့် နောက်တစ်ခုကတော့.. က ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ music maker silver ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Download size 124 MB ရှိပီးတော့ ဒီအတိုင်းလေး သွင်းလိုက်ယုံပါပဲ။ password တော့ တောင်းတယ်ဗျ။ Password က No5kfybP လို့ ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ ဒီနေရာမှာ.. ဒေါင်းလုပ် လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျာ.
လုပ်လို့မရနိုင်တာကတော့ ၁၅၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ soundloops တွေကို ဆွဲလို့မရပါ။ CD ပေါ်ရေးလို့မရဘူးပေါ့။ ဒါလည်း google နဲ့ CD burner ကောင်းကောင်းရှိရင် ပြီးတာပါပဲ။
Freewarez4mm သုံးသပ်ချက်။ ။ ကိုယ်ပိုင် ဂီတတွေ ဖန်တီးချင်တဲ့ beginner တွေ အတွက် တော့ တော်တော်ကောင်းတဲ့ software လေးဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်။
Buffer Zone free one day at GOTD
Filed under: Security — gurugyi @ 8:49 am
ကိုယ့်စက်ကို သူများက လာတိုက်ခိုက်မှာ.. သိပ်ကြောက်နေတဲ့သူတွေအတွက် ဒေါ်လာ ၄၀ လောက်တန်တဲ့ Bufferzone ဆိုတဲ့ ကာကွယ်ပေးတဲ့ software တစ်ခုကို တစ်ရက်တိတိ အလကားပေးနေပါတယ်။
သူက ဒီလို ကာကွယ်ပေးတယ်တဲ့
ဒေါင်းလုပ် ဆွဲမယ်ဆိုရင် ၉.၇၂ MB ရှိပီးတော့ ဒီနေရာမှာ ဆွဲလို့ရပါတယ်။
Windows XP/Vista (32-bit) ဆိုရင် ကောင်းကောင်း သုံးလို့ရပါတယ်။
22-ဒီဇင်ဘာ – ၂၀၀၉ ခုနှစ် နေ့လည် ၂ နာရီအထိ အလကားပေးနေပါတယ်။
Serif Digital Scrapbook Album (worth $37.50) – 4Free !
Filed under: Imaging — gurugyi @ 5:08 am
ဒါကတော့ အလကားရတဲ့ “Photo scrap book ” လေးပါ။ size က ၄၂.၅ MB ရှိပါတယ်။
လိုချင်တယ်ဆိုရင် ဒီနေရာမှာ.. ဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုက်ပါ။
Norton Internet Security 2010 + နော်တန် အမိုက်စားတွေ
Filed under: Security — gurugyi @ 9:06 am
Norton မှ Norton ဆိုတဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတုန့်ပြန် ပွဲကြီး စတင်နေပါပြီ။
Norton Internet Security 2010 (သွင်းလို့အမြန်ဆုံးလို့ပြောပါတယ်။ ရက် ၉၀ တိတိ အလကား အပြည့်သုံးခွင့်ပေးထားပါတယ်။) ဒီနေရာမှာ download တိုက်ရိုက် ဆွဲပြီးလည်း သွင်းလို့ ရပါတယ်။
Norton Antivirus 2010 ကို တစ်နှစ်လုံး လိုင်စင် နဲ့ သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ installer ၃ ခုကို download ဆွဲထားဖို့တော့ လိုပါတယ်။
၁။ ရက် ၉၀ သုံးလို့ရတဲ့ norton AV 2010 ကို ဒီနေရာမှာ download ဆွဲပါ။
၂။ နောက် ထပ်တစ်ခုကို တော့ ဒီနေရာမှာ ဆွဲပါ။
၃။ ရက် ၁၈၀ သုံးလို့ရတဲ့ နောက် ဆုံးတစ်ခုကိုတော့ ဒီနေရာမှာ ဆွဲပါ။
တစ်ခုရက်လွန်သွားရင် အဲဒီဟာကို ဖြုတ်လိုက်ပီး နောက် တစ်ခုတင်ပါ။ အဲဒီလို တင်သွားမယ်ဆိုရင် တရားဝင် ရက်၃၆၀ သုံးလို့ရတဲ့ Norton Anti-virus 2010 ကို ရမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်။
Filed under: System Tools — gurugyi @ 8:35 am
ကိုယ့် ကွန်ပျူတာပေါ်က ဖိုင်တွေကို သိုသိုသိပ်သိပ် သိမ်းဆည်းထားချင်တယ်ဆိုရင် ဒီစတာလင်ပေါင် ၁၆.၂ ပေါင် နဲ့ ရောင်းတဲ့ Backup4all lite 4.3 က သုံးလို့ကောင်းတဲ့ software လေးပါ။ ဒီနေရာမှာ download ဆွဲလို့ ရပါတယ်။
အလုပ်တစ်ခုပိုလာတာကတော့ www.backup4all.com/free/creativemark.html. မှာ သွားပီးတော့ register လုပ်ပေးဖို့တော့ လိုပါမယ်။ ဒါဆိုရင် ၁၆.၂ ပေါင်တော့ သက်သာသွားပီပေါ့။ တကယ်တော့ ရောင်းရင် လည်း မဝယ်ပါဘူး။ အလကားပေးလို့ ယူတာ။
Filed under: Multimedia — gurugyi @ 8:22 am
iphone ကိုင်တဲ့ စတိုင်ကျကျ ဘိုးတော် ဘွားတော်တို့အတွက်… Wondershare iPhone Ringtone Converter လေးကို ၁၉-၁၂-၂၀၀၉ မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁ နာရီ မခွဲခင် ယူမယ်ဆိုရင် GOTD မှာ အလကားပေးနေပါပြီ။ ဒီနေရာမှာ download ဆွဲလို့ရပါတယ်။
Filed under: System Tools — gurugyi @ 8:06 am
ခုတော့ စတာလင်ပေါင် ၃၅ ပေါင် တန်တဲ့ Windows optimization software တစ်ခုကို အလကားရပါပြီ။ Ashampoo WinOptimizer 2010 Advanced (compatible with windows7) ကို ရပါပြီ။
ဒီနေရာမှာ download ဆွဲပါ။ install လုပ်ပြီးရင် register လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။
Filed under: Security — gurugyi @ 6:39 am
ကိုယ့် ကွန်ပျူတာမှာ ဖျက်လိုက်တဲ့ ဖိုင်တွေ၊ သုံးခဲ့ဖူးတဲ့ အင်တာနက်ရာဇဝင်တွေ၊ ခြေရာတွေ ကောက်ကြောင်းတွေ ကျန်နေတတ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကို ဒီအတိုင်းလေး ဖျက်လိုက်ယုံနဲ့ မမြင်ရတာကလွဲရင် ပျက်မသွားတတ်ပါဘူး။ ပြန်ဖေါ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ တကယ်ကျကျနန ဘယ်လိုမှ ပြန်ဖေါ်လို့ မရအောင် ဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒေါ်လာ ၂၀ နဲ့ ရောင်းတဲ့ East-Tec Eraser 2009 ဆိုတဲ့ software က ခု အလကားပေးနေပါပြီ။ တစ်နှစ်စာ လိုင်စင်ရမှာပါ။
ဒီနေရာမှာ ဒေါင်းလုပ် ဆွဲရင်း register ပါလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် တစ်ခါတည်း လိုင်စင်ရှိတဲ့ security software ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုရပီပေါ့ဗျာ…။
Filed under: File Optimizer — gurugyi @ 9:22 am
ခုကနေ နောက် တစ်နေ့ မကူးခင် ယူမယ်ဆိုရင် licenced version ရမယ့် FILEminimiser pictures ဆိုတဲ့ software ပါ။ သူ့အဆိုအရတော့ ဓါတ်ပုံတွေကို ၈၂% ထိ ချုံ့ပေးလို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အလကားပေးပါတယ်ဗျာ။
Filed under: Office Application — gurugyi @ 9:20 am
Office suite တစ်ခုလုံးကို သုံးဖို့ခက်တယ်ဆိုရင် SoftMaker Office 2008 က သုံးလို့ ကောင်းတဲ့ Office suite လေးပါ။ စာရိုက်မယ်။ စာရင်းဇယားဆွဲမယ်။ presentation ကောင်းကောင်းလုပ်မယ် ဆိုရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ ခု အလကားပေးနေပါပီ။ လှူချင်လည်း လှူပေါ့နော်။ ဒီနေရာမှာ အလကားပေးနေတာ။ သူက Windows 2000 နဲ့ အထက်ဆိုရင် ရတယ်။ အားလံးပေါင်း မှ ၅၈.၉ MB ပဲ ဆွဲစရာလိုတယ်။
အလကားပေးတဲ့ site တွေ။
လန်ဒန်က အလကားပေးတဲ့ စတိုးဆိုင်
December တစ်လလုံး တစ်ရက်မပျက် ဖရီးပေးမယ်တဲ့။